सल्यानमा काँग्रेसले जितेका स्थानीय तहले मात्रै बुझाए पहिलो चौमासिक प्रतिवदेन, अरुले बुझाएनन्
दोस्रो चौमासिक सकिन थोरै समय हुँदा समेत सल्यानका ७ वटा स्थानीय तहले पहिलो चौमासिक प्रतिवदेन बुझाउन सकेका छैनन् । दोस्रो चौमासिकको निकासा लिएर धमाधम काम गर्नु पर्ने समयमा पनि उनीहरुले पहिलो चौमासिकको प्रतिवदेन बुझाउन नसकेका हुन ।
जिल्लाका १० वटा स्थानीय तहमध्य ३ स्थानीय तह शारदा नगरपालिका, छत्रेश्वरी गाउँपालिका र त्रिवेणी गाउँपालिकाले मात्रै पहिलो चौमासिक प्रतिवेदन बुझाएका छन् । यी तीन स्थानीय तह नेपाली काँग्रेसले जितेका स्थानीय तह हुन् ।
त्यस बाहेक अन्य सात स्थानीय तहले पहिलो चौमासिकको प्रतिवदेन नबुझाएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सल्यानले जनाएको छ । पहिलो चौमासिकको प्रतिवदेन बुझाउन नसकेपछि दोस्रो चौमासिकको रकम निकासा गर्न नमिल्ने कोलेनिका सल्यानका सूचना अधिकारी वृद्धिमान बस्नेतले बताए । उनले भने– “हामीले मंसिर पहिलो हप्ताभित्र पहिलो चौमासिकको प्रतिवेदन बुझाउन पत्राचार गरेका थियौ तर एक महिना भन्दा बढि भईसक्दा समेत तीन तह बाहेक अन्यले बुझाउन सकिरहेका छैनन् ।”
प्रतिवेदन नबुझाएका अन्य स्थानीय तहका कारण प्रतिवदेन बुझाएका तहलाई रकम निकासा गर्न समेत समस्या भएको बस्नेतको भनाई छ । “जिल्लाका सबै तहमा एकैपटक दोस्रो चौमासिक निकासा गरौला भनेर कुरियो तर सात तहले नबुझाउदा बुझाएका तहको पनि निकासा रोकिएको छ”– उनले भने ।
पहिलो चौमासिक भित्र पर्ने साउन, भदौ, असोज र कात्तिक महिनामा कुन कुन योजनाको लागि कति बजेट खर्च भयो ? कति बजेट खर्च हुन बाँकी छ ? कति बजेट खर्च हुने अन्तिम चरणमा छ जस्ता कुरा उल्लेख गरिएको विवरण सहितको प्रतिवेदन तयार पारेर दोस्रो चौमासिकको लागि रकम माग गर्नु पर्ने हुन्छ तर पहिलो चौमासिकको प्रतिवेदन बुझाउन ढिलाई हुँदा दोस्रो चौमासिकको रकम निकासा हुन सकिरहेको छैन ।
पहिलो चौमासिकको प्रतिवदेन नआएसम्म दोस्रो चौमासिकको रकम निकासा गर्न नमिल्ने सूचना अधिकारी बस्नेतको भनाई छ । पहिलो चौमासिकमा विकास बजेट खर्च नभएको र तलव भत्तामात्र खर्च भएको अहिले विकास बजेट खर्च भई रहेकाले प्रतिवेदन बुझाउन ढिलाई भएको कुमाख गाउँपालिका निमित्त प्रमुख प्रशासनिकय अधिकृत विनोद अधिकारीले बताए ।
पहिलो चौमासिकमा उपभोक्ता समिति गठन, सम्झौता लगायतका कार्य हुने भएकाले विकास बजेट खर्च हुन नसक्ने र शोही बजेट बची रहेकाले प्रतिवदेन बुझाएर दोस्रो निकासाको माग नगरेको उनको भनाई छ । समुदायमा हुने कार्य अहिले भईरहेकाले केही समयभित्रै कोलेनिकामा पहिलो चौमासिकको प्रतिवेदन बुझाएर दोस्रो चौमासिकको लागि रकम निकासा गरिने अधिकारीको भनाई छ ।